အန်တီ ရဲ့အဖော်မွန် – Hlataw.com
အန်တီ အိခိုင်အိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်က တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ် စားအိမ်သောက်အိမ် ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု အဲဒီမြို့ကို စပြောင်းလာတော့ သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အသက် ၁၀နှစ်လောက်မှာ စပြောင်းလာတာ ကျွန်တော့်မိသားစုကလည်း အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေရယ် အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ်မှ မိသားစုက သုံးယောက်ပဲရှိတယ်။
ကျွန်တော်က တစ်ဦးတည်းသောသား အဖေက ကုန်တင်ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာပေါ့။ အဖေက နယ်ထွက်ပြီးကားမောင်းနေရတာများတယ်။ တစ်လမှ သုံးရက်လောက်ပဲ အိမ်မှာနေရတာလေ။ အမေကလည်း ဈေးတစ်ခုမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းတဲ့ ကုန်စိမ်းသည်ဆိုတော့ အိမ်နဲ့ဈေး ဈေးနဲ့အိမ် ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စားအိမ်သောက်အိမ်က အိမ်နီးနားချင်းအိမ်ဖြစ်တဲ့ အန်တီအိခိုင် တို့အိမ်ပဲ ဆိုပါတော့။ အန်တီအိခိုင် အိမ်မှာကလည်း အန်တီအိခိုင်ရယ် သူ့ရဲ့အမေရယ်ပဲ ရှိတာဗျ။ အဲ့တော့ သူတို့လည်း အဖော်လိုနေတာနဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့။
အန်တီအိခိုင်ရဲ့အမေကတော့ ကျွန်တော် ကိုးတန်းရောက်တော့ ဆုံးသွားတယ်လေ။ အဲ့ဒီကတည်းက ကျွန်တော် အန်တီအိခိုင်အိမ်မှာပဲ အိပ်ဖြစ်တာများတယ်။ အဖော်မရှိလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုထဲပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြောတာများပြီးလိုရင်း မရောက်ပဲဖြစ်နေတော့မယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံက ဒီလိုဗျ ကျွန်တော်ကျူရှင်ကနေ အစောကြီး ပြန်လာတဲ့နေ့မှာစဖြစ်တာပဲ။ ကျူရှင်ဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ် ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ကျလို့ အခုဟာက သုံးနှစ်မြောက် ကျူရှင် တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။
အဲ့လို ကျူရှင်က တစ်ချိန်ဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့ပေါ့။ ဆရာမ နေမကောင်းလို့,လို့ပြောတာပဲ။ အိမ်ကိုရောက်တော့ ဗိုက်ကလည်းဆာနေတာနဲ့ အန်တီအိခိုင်ဘာတွေများချက်ထားလည်းဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ကို ဝင်ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ စားစရာဘာမှမတွေ့တာနဲ့ အန်တီအိခိုင်ကို မေးမယ်ဆိုပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ တစ်ခုခု လုပ်နေလားဆိုပြီး တွေးရင်းနဲ့ သူ့အိပ်ခန်းဘက်ကို လျှောက်လာလိုက်တယ်။
ပါးစပ်ကလည်း အော်ခေါ်ရင်းနဲ့ ” အန်တီအိခိုင် ရေ အန်တီအိခိုင် စားစရာဘာတွေ ရှိသေးလည်း ” ပြောရင်းနဲ့ သူ့အခန်းရှေ့အရောက်မှာ အိပ်ခန်းတံခါးက ခပ်ဟဟ လေးဖြစ်နေတာနဲ့ အခန်းထဲကို အမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးပြီး ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုလည်း ကြည့်ချင်စရာဖြစ်နေတာပါ။ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်လေးကိုဝတ်ပြီး အိပ်နေတာ ဒီအတိုင်းဆို အကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် အခန်းတံခါးကို ကျောပေးပြီး ဘေးတစောင်းလေးအိပ်နေတာ ဂါဝန်လေးကလည်း တင်ပဆုံလောက်ထိ လန်နေတော့ အန်တီအိခိုင်ရဲ့ အမွှေးရေးရေးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုမြင်နေရတယ်။
ကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော့် လီးကလည်း တောင်လာတယ်။ ဘေးတစောင်းအိပ်နေတော့ နဂိုကမှ အိုးကောင်းပါတယ် ဆိုမှစောက်ဖုတ်ကြီးကို နောက်လန်ပစ်ပြီး လာလိုးလှည့် ပါလို့ ခေါ်နေသလိုလိုပါပဲ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ တံထွေးတစ်ချပ်ကို ကွတ်ကနဲ့ မြည်အောင် မျိုချလိုက်ရင်း ပြေးပြီးလိုးချင်နေတဲ့ စိတ်ကို မနည်းထိန်းချုပ်ထားရတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့အဒေါ်ရင်းလိုပါပဲ လားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပြေးပြီး လိုးချင်တဲ့စိတ်က ဒွန်တွဲနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သြော် သြော် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တံထွေးကို မျိုချရင်း နောက်ပြန်လှည့်ပြီး တံခါးကိုပိတ် မီးဖိုချောင်နဲ့ အခန်းတံခါး အလယ်လောက် ကနေပဲ အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
” အန်တီအိခိုင်ရေ အန်တီအိခိုင် သားဗိုက်ဆာလို့ ” ” အင်းးးး ဟင် သား လာပြီ အန်တီအိခိုင်လာပြီ သားရေ ” ဆိုတဲ့အသံလေးပြုရင်းနဲ့ ကဗျာကယာနဲ့ ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ လူက အိပ်ချင်မှုးတူးရုပ် ဆံပင်လေးက ကပိုကရိုနဲ့ အိမ်နေရင်းဆိုတော့ ဘောလီမပါပဲနဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ ညဝတ်ဂါဝန်လေးနဲ့ ဆိုတော့ နို့သီးခေါင်းလေးက ရေးရေးလေး ထွက်နေသယောင်နဲ့ ဆိုတော့ စောနက အရှိန်နဲ့ပေါင်းပြီး လီးကပြန်တောင်လာတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ အောက်ခံဘောင်းဘီပါလို့ နို့မို့ဆို မလွယ်ပါ။ ” သား ဒီနေ့ကျူရှင်က စောလှချည်လား ဒါမှမဟုတ် မင်းကျူရှင် လစ်လာတာလား ဟင် ” ” မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အန်တီအိခိုင်ကလည်း ဒီနေ့ တစ်ချိန်နားလို့ စောစော ပြန်လာတာပါ သားကျူရှင် မလစ်ပါဘူး ” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် စကားကိုလည်း ထိန်းပြီးပြောနေ ရတယ်။ မျက်လွှာကို အောက်ချပြီးပေါ့။
မချလို့လည်းမဖြစ် တော်ကြာ မျက်နာပျက်နေတာ ရိပ်မိသွားမှာ ဆိုးလို့ပါ။ အဲ့ဒီကိစ္စ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အန်တီအိခိုင်အပေါ်မှာ မရိုးသားတော့ပါဘူး လိုးချင်စိတ်က များနေခဲ့တယ်။ လိုးခွင့်ရအောင်လည်း အမျိုးကြံနေတာပေါ့ဗျာ။ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒါပဲဗျာ။ အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်လွန်လား မှားလားဗျာ ဒီနေ့လည်း ကျူရှင်ပိတ် လို့ မနက်စာစားပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လာထိုင်နေတာ ထိုင်နေတာက ၃နာရီကျော်ရှိပြီဆိုတော့ ပြန်ရတော့မယ်။ စိတ်ကလည်း အန်တီအိခိုင်ကို ဘယ်လိုလုံးပြီး လိုးခွင့်ရမလဲ ဆိုတာပဲတွေးနေတာ တွေးနေရင်း လက်ကျန်စီးကရက်တိုကို တစ်ချက်ဖွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေ ပြန်လာပြီး ကုန်မာဆိုင်ကိုဝ် ဆေးလိပ် တစ်ဘူးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။
အိမ်ကိုရောက်တော့ အိမ်တံခါးက ပိတ်ထားတာ ပိတ်တာကလည်း အတွင်းကဆိုတော့ အန်တီအိခိုင် ရှိနေတယ်။ အိပ်နေတာ နေမှာဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့သော့ပိုနဲ့ဖွင့်ပြီး ဝင်လာလိုက်တယ် ။ ” အန်တီအိခိုင်ရေ … အန်တီအိခိုင် ” လို့အော်ခေါ်လိုက်တယ် ရေချိုးခန်းထဲက ရေသံကြားမှ ” အော်…ရေချိုးနေတာနဲ့တူတယ် ” ကျွန်တော်လည်း အန်တီအိခိုင်ရေချိုးနေလို့ ဆက်မခေါ်မိတော့ပဲ ဧည့်ခန်းမှာပဲ သတင်းဖတ်ရင်း ဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ ” ကျွီ …” ”သား မင်းတစ်မနက်လုံး ဘယ်တွေ လျှောက်သွားနေတာလည်း ဟင် သား ” ကျွန်တော် အန်တီအိခိုင်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ” ဗျာ……အန်တီအိခိုင် ” ” သား ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေတာလဲလို့ မေးနေတာ” ကျွန်တော် ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ဘဲ မျက်လုံးများပြူး၍ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် ရပ်နေသော အန်တီအိခိုင်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရင်လျားထားသော ထဘီပါးပါးလေး တစ်ကွင်းသာပါတယ်။ ရေချိုးထားလို့ ကိုယ်လုံးမှာရေစိုနေတော့ ထဘီ နဲ့ အသားက ကပ်နေတယ်။ ဆံပင်ပေါ်မှ ရေစက်ကလေးများကလည်း ဖြူဖွေးမို့မောက်သော နို့အုံကြီးနှစ်ခုကြားသို့တစ်စက်စက်နဲ့စီးကျနေတော့ ကျွန်တော်လို ဆယ်ကျော်သက်ပိုးထခါစ အရွယ်မပြောနဲ့ မြင်သူတကာတောင် စိတ်ထိန်း၍ ရနိုင်မည်မဟုတ် ထဘီခြားမှထိုးထွက်နေသော နို့သီးခေါင်း လေးများမှာလည်း မြင်သူတကာ စို့ချင်အောင် စူထွက်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အန်တီအိခိုင်ရဲ့ မျက်နှာကို မမြင်တော့ပါဘူး။ နို့အုံဖွေးဖွေးလေးနဲ့ စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေး များကိုသာ စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။
” ဟဲ့ သား … အန်တီ မေးနေတယ်လေ ” ” အာ …ဟိုဟာ…ဘယ်မှမသွားပါဘူး သားလက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်နေတာပါ ” ” သား နော် အသက်ကဖြင့် ဘာမှမရှိသေးဘူး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရတာနဲ့ ဆေးလိပ်လေး သောက်ရတာနဲ့နော် ဟင်း ဟင်းးးး ” မျက်နှာကျောလေးတင်းပြီး မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ပြောရင်း အန်တီအိခိုင်လှည့်ထွက်သွားတယ်။ သူလမ်းလျှောက်တာကို ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်။ အန်တီအိခိုင် ဖင်ကြီးက စူကောက်နေပြီး ရေစိုထားတာကြောင့် ဖင်အောက်က အရစ်ကြီးတွေက ထင်ရှားနေတယ်။ ဖင်ကြီးက ကိတ်ကလည်းကိတ် ဖင်ကြားထဲမှာ ထဘီက ညက်နေသေးတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ပြေးပြီးသာ စောင့်လိုးနေမိတော့တယ်။
လီးကလည်း တောင်လာတော့ အန်တီအိခိုင်ရဲ့ ဖင်ကြီးကို ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိမ်သာထဲကိုသွား ဖုန်းထဲကအန်တီအိခိုင် ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး ဂွင်းထုပစ်လိုက်တယ်။ ထုပြီးသွားတော့မှ ဧည့်ခန်းမှာ ပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ အန်တီအိခိုင်ကလည်း ကျွန်တော် အမူအရာတွေ ပျက်နေတာကို သတိထားမိတယ်ထင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတုန်း အန်တီအိခိုင် သူ့အခန်းထဲကနေ အဝတ်အစားလဲပြီး ဧည့်ခန်းကို ထွက်လာတယ်။ အားပါးပါး လှလိုက်တာဗျာ အစိမ်းရောင်ရေညှိ အကွက်တွေနဲ့ ခပ်ပါးပါးအင်္ကျီကိုဝတ်ထားတာတော့ အင်္ကျီအောက်က အနီရောင်ဘော်လီကို ထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတယ်။ ထဘီကလည်း အစိမ်းရောင်နုနုအအိသားကို ဝတ်ထားပြန်တော့ ကောက်ချိတ်နေတဲ့ ဖင်ကြီးက နုအိပြီးရမ်းခါနေတာပေါ့။ အသားအရေက ခပ်လတ်လတ်အရပ်ကမနိမ့်မမြင့်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဆိုတော့ မြင်ရတဲ့ ပုထုဇဉ်ယောကျာင်္းသားတွေ လီးမတောင်ရင် ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ။ အခန်းပြင်ရောက်မှ ဒေါက်ဖိနပ်ကို ကုန်းပြီးစီးလိုက်တော့ နို့အုံကြီးတွေကအောက်ကို တွဲကျလာတယ် နို့အုံကြီးကြားထဲကို ကျွန်တော့်လီးနဲ့တာ ပြေးပြီး လိုးချင်နေမိတယ်။
ဖွပြီးကောက်ထားတဲ့ဆံပင်တွေကိုလည်း ကျွန်တော့် လီးကို အယားပြေပွတ်ချင်နေမိတယ် ။ ” သား … ထမင်းစားရအောင်” “ဟုတ် အန်တီအိခိုင်” ထမင်းက သိပ်ပြီးဆာလှတယ်မဟုတ် အန်တီအိခိုင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အနီးကပ်ထပ်ပြီး ကြည့်ချင်နေတာကြောင့်ပါ။ ” သား … ဟင်းတွေထည့်စားလေ ” ပြောလည်းပြော ဟင်းကိုလည်း ထမင်းပန်းကန်ထဲ ထည့်ပေးရင်းပေါ့။ ” ဟုတ် … အန်တီအိခိုင် ကန်တော့နော် ” ” အမလေးဟယ် ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြား ပြီးတော့ သားကို တစ်ခုပြောရအုံးမယ် သားက အရွယ်မရောက်သေးဘူး ဘာညာဘာညာတွေ အန်တီ မကြားချင်ဘူးနော် ” ” သားက ဘာတွေလုပ်နေလို့လည်း ဗျ ” ” ဟင်း ဟင်းးးးး သားရဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေကို အန်တီ လျှော်တာပါ မင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိတယ် ” ကျွန်တော်လည်း သူ့စကားကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပဲ သူ့ရဲ့ နို့အုံကြီးကိုပဲ ငေးကြည့်နေမိတယ်။
” ဟဲ့ …သား ဘာကြည့်နေတာလဲ ” လို့ပြောမှ ကျွန်တော့် မျက်လုံးကို ထမင်းပန်းကန်ပေါ် လွှဲလိုက်ရတယ် ထမင်းစားပြီးတော့ကို လီးက တောင်နေသေးတယ်။ စားသောက်ပြီးသွားတော့ အန်တီအိခိုင် ပန်းကန်တွေသွားဆေးတယ်။ ဆေးပြီးသွားတော့ ပန်းကန်တွေကို ကြောင်အိမ်ထဲ ထည့်နေတယ်။ ထမင်းစားပွဲနဲ့ ကြောင်အိမ်ကလည်း ကပ်နေတာဆိုတော့ အန်တီအိခိုင်စားပွဲကြားဝင်ပြီး ကြောင်အိမ်ထဲ ပန်းကန်တွေထည့်တော့ သူ့ရဲ့ဖင်ကြီးနဲ့ နေရာက တင်ပြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်းထမင်းစားပြီး ဆေးလိပ်လေးသောက်ပြီး ရေသောက်ချင်တာနဲ့.. ” အန်တီ နည်းနည်းလောက် ” အန်တီအိခိုင်က ရှေ့ကိုကုန်းပြီး တိုးလိုက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဖင်လုံးကြီးက အပေါ်ကိုကော့တတ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စားပွဲကြားကို တိုးဝင်လိုက်ပြီး အိစက်ပြီး ကော့တက်နေတဲ့ အန်တီအိခိုင်ဖင်ကို တောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးနဲ့သွားထောက်မိတယ်။
ဖင်ကြီးကလည်း တင်းတင်းလေးဆိုတော့ စက္ကန့်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပွတ်နေမိတယ်။ သူကလည်းငြိမ်ခံတော့ ” အိုး… … ရှီး.. …ကောင်းလိုက်တာ အန်တီအိခိုင်ရယ် ” ဆိုပြီး စိတ်ထဲကနေ ပြောနေတုန်းရှိသေး.. ” အို့ ဟင့် … အင်း သားရယ် သားလီးက နွေးနေတာပဲ ” အန်တီအိခိုင် ပြောလည်းပြော သူ့ဖင်ကြီးကို အပေါ်မြောက်လိုက် အောက်ချလိုက်နဲ့ ပွတ်လိုက်နဲ့လုပ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း ခါးကို နောက်နည်းနည်းဆုတ် အားနဲနဲယူပြီး ဆောင့်နေလိုက်တာ တော်တော်လေးကြာတော့ ကျွန်တော့် လီးထိပ်က အရည်လေးတွေ စို့လာတာကို သတိထားမိတယ်။
” အာ့ … အာ … အိုး.. ဆောင့်ပါအုံး သားရယ် ” လို့အန်တီအိခိုင်ကပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဆံပင်တွေကို ခပ်ဖွဖွလေး ဆွဲပြီး လက်တဖက်က ဖင်တွေကို ပွတ်နေရင်းနဲ့ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆံပင်ဆွဲထားတဲ့လက်ကို ဖယ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ပုဆိုးချွတ်လိုက်တော့မှ အန်တီအိခိုင်က ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြီး ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကို သူ့ပါးစပ်နဲ့တေ့ပြီးနမ်းတယ်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကို သူ့ရဲ့ လျှာနဲ့တိုးပြီးဝင်လာပြီး ကလိသွားလိုက် ကျွန်တော့် ပါးစပ်လေးကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက် လုပ်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှကိုမနေနိုင်တော့နဲ့ သူ့ကို ဆွဲလှန်မယ်လုပ်မှ သူကဒူးထောက်ထိုင်ကာ သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျွန်တော့် အောက်ခံဘောင်းဘီကြားထဲ လက်နိုက်ပြီး လီးကို အပေါ်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ” အန်တီအိခိုင်ရဲ့ အဖုတ်လေးကိုလည်း ကုန်းပြီး ပွတ်ပေးပါဦးကွယ် ” ပြောလည်းပြော ဂွင်းတိုက်သလိုလေး လုပ်ပေးနေတော့ ” အာ့ … အား.. သား ပြီးတော့မှာ ” လို့ပြောလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ့်လီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းထုတာနဲ့ ခုလို မိန်းမတစ်ယောက်က ကိုင်ပြီးလုပ်ပေးနေတာက ခံစားရတာချင်းမတူဘူးဗျ ခံစားလို့ရမ်းကောင်းတာဗျ။ ပြီးတော့ အန်တီအိခိုင်က ဘောင်းဘီကြားကနေ အပေါ်ကိုထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို အောက်ခံဘောင်းဘီအပေါ်ကနေပဲ သူ့သွားနဲ့မနာအောင် ခပ်ဖွဖွလေး ကိုက်ပေးလိုက် ဒစ်ကလေးကို စုပ်လိုက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အန်တီအိခိုင်ရဲ့ ခေါင်းကိုဆွဲ သူ့ပါးစပ်ကို ကျွန်တော့်လီးနဲ့ တအားဆောင့်ထိုးမိလိုက်တယ်။
” အာ့… အွတ် … ဟွတ် … အဟွတ် အဟွတ်…” သူလည်တွေတောင် နင်ပြီး ချောင်းတောင်ဆိုးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖီးတအားကောင်းလာတာနဲ့ အန်တီအိခိုင်ကို ခဏဖယ်ခိုင်းပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီ ကို ချွတ်လိုက်တယ်။ အန်တီအိခိုင်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကို ကြည့်နေရင်း သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို အကုန်ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လီးကို သူ့လက်နဲ့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပြီး ဂွင်းထုပေးတယ်။ ကျွန်တော်က အန်တီအိခိုင်ရဲ့မေးရိုးကို လက်နဲ့ ညှစ်လိုက်မှ ပါးစပ်လေး ဟသွားတာ အဲ့တော့မှ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ကျွန်တော် တစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီးမှ လီးဒစ်ထိပ်လေးနဲ့ ပွတ်လိုက် ပါးစပ်ကိုလိုးလိုက်နဲ့ ဆယ့်ငါးချက်လောက် ရှိအုံးမယ်။
ကျွန်တော်လည်း အရှိန်မထိန်းနိုင်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်ထဲတင် တစ်ချီပြီးလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးလည်း ကျွန်တော့် လီးရည်တွေ ပေပွကုန်တယ်။ ပါးစပ်ထဲဝင်တဲ့ လရည်တွေကို မျိုချပြီး အပြင်မှာ ပေနေတဲ့ လရည်တွေကိုလည်း သူ့လက်နဲ့ယူပြီး စုပ်ပြတော့ ကျွန်တော်လည်းခါးကို နောက်နည်းနည်းဆုတ်အရှိန်ယူပြီး သူ့ပါးစပ်ကို တအားဆောင့်လိုးလိုက်တယ်။
” အို့… အား…… ရှီး.. ကောင်းလိုက်တာ အန်တီအိခိုင်ရယ် ” အန်တီအိခိုင် ပါးစပ်ထဲကို လီးတချောင်းလုံး ဝင်သွားပြီး သူရဲ့ မျက်နှာကလည်း ကျွန်တော့်ပေါင်ရင်းသို့ ကပ်သွားတယ်။ ” ဂွတ် … အွတ် … အဟွတ် အဟွတ် ” အန်တီအိခိုင်က ကျွန်တော့်လီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်တယ်။ သူလည်း မောမောနဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ် ဖင်ချထိုင်လိုက်တယ်။ နံရံကိုကျောမှီပြီး ခြေထောက်ကို နည်းနည်းကားထားတော့ ဖုဖောင်းပြည့်မောက်နေတဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက အရည်တွေကိုရွှဲလို့ ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ပဲ အန်တီအိခိုင်ရဲ့ ပေါင်ကိုဖြဲလိုက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းလျားမှောက် ကျွန်တော့ခေါင်းကို သူ့ပေါင်းကြားထဲတိုးဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ ဘေးမှာပေနေတဲ့ သူ့ရဲ့ စောက်ရည်တွေကို ပါးစပ်နဲ့ကုန်းစုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း တစ်လျှောက်ကို လျှာဖျားနဲ့ အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲလိုက် စောက်ဖုတ်ထဲကို လျှာနဲ့လိုးလိုက် စောက်ဖုတ်အတွင်းထဲကို ရောက်နိုင်သမျှ ရောက်အောင် ကျွန်တော့် လျှာကို ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့စောက်စေ့လေးကို သွားလေးနဲ့မနာအောင် ဖွဖွလေး ထပ်ကိုက်လိုက်တော့ အန်တီအိခိုင်လည်း ခါးလေးကော့လာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆံပင်အုံကြီးတခုလုံးကို သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ လွတ်သွားမှာစိုးသည့်အလား တအားဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်။
” အင့် … အို့ … အား… မခံစားနိုင်တော့ဘူးကွာ အန်တီအိခိုင် တအားလိုချင်နေပြီ သားရယ် အန်တီအိခိုင်ကို နှိပ်စက်နေတာလားကွာ ” လို့မပီမသနဲ့ပြောရင်း ” သား … ထတော့ ပြီးရင် ခြေထောက်ကိုဆင်းပြီး ထိုင်လိုက် ” ကျွန်တော်လည်း မှုတ်နေရာကရပ်လိုက်ပြီး ခြေဆင်းထိုင်ပေးလိုက်တယ် အန်တီအိခိုင်လည်း တော်တော်ထန်နေပါပြီ။ အငမ်းမရကိုဖြစ်လို့ပေါ့ အန်တီအိခိုင်လည်း ထိုင်နေရာက ထလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကိုကိုင်ကိုင်ပြီး အပေါ်ကနေ ခွထိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ လီးကိုတေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ဆီးခုံးနှစ်ခုထိတဲ့အထိ ထိုင်ချလိုက်တယ်။
” ဗျစ်……ဗျစ်…… ဗြီး…..” စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးအဆုံးဝင်သွားတော့မှ ခပ်မှန်မှန်လေးဆောင့်ပေးတယ်။ ” အာ့ အို့ အင်း…” ” ဖတ်… ဖတ် … ဖတ် ဖောက် … ဖာက် … ဖောက် ဖွတ် … ဖွတ် … ဖွတ် ” ” အာ့ အို့ အင်း… ကောင်းလိုက်တာ သားရယ်” ” ဖတ်… ဖတ်… ဖတ် ဒုတ် … … ဗွီ … … ဗျစ် … … ဗျစ် ” ပြောလည်းပြော အပေါ်ကနေ တအားဆောင့်နေတော့ ကျွန်တော်လက်ကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး။ သူ့ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွချေပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဖြူဖွေးပြီးအိစက်နေတဲ့ နို့နှစ်လုံးကြားကို ခေါင်းဝင်ပြီး တအားရှုံ့နမ်းပြီး ကုန်းစို့နေမိတယ်။ သူကတော့ အဆောင့်မပျက်ဘူး ကျွန်တော်လည်း နို့ကြားကနေ ခေါင်းကိုဖယ်လိုက်ပြီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ နို့သီးတလုံးကို ဖမ်းစုပ်လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို အားထည့်ပြီး ကိုက်လိုက်တော့။
” အာ့…အားး အို… အို့ သားရယ်အန်တီ မရတော့ဘူးကွာ ” ” ဖတ်… ဖတ်… ဖွတ်… ဖွတ်… ဗြီး… ” ” အာ့ … အာ့… အာ့… ” အန်တီအိခိုင် တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်သွားတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ လီးကလည်း ပူနွေးနွေးအရသာကို ခံစားလိုက်ရတော့ အောက်ကနေပြီးတော့ လက်နှစ်ချောင်းလုံးကို နောက်မှာ အားယူထောက်လိုက်ပြီး တအားပြန်ဆောင့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲက သားအိမ်လေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ လရည်နွေးနွေးလေးတွေ ပြန်ပန်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။
” အား…. ကောင်းလိုက်တာ အန်တီအိခိုင်ရယ် ” အန်တီအိခိုင်ကလည်း မောမောနဲ့ ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို ဖက်းထားရင်းနဲ့ မှိန်းပြီးအမောဖြေနေတယ် အမောပြေတော့ သူကျွန်တော့်အပေါ်ကနေ ထပြီး ဆင်းမယ့်အလုပ် မဆင်းစေပဲ သူ့ကိုပြန်ဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်လိုက်ပြီး ” နောက်ထပ်လည်း အန်တီအိခိုင်ကို လိုးချင်သေးတယ် ” ” သြော် သားရယ် အန်တီအိခိုင်ကလည်း ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး သားနဲ့အန်တီမအိခိုင်က တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူနေနေကျတာလေ သားဆန္ဒရှိတဲ့ အချိန်တိုင်း အန်တီအိခိုင်ရဲ့ အခန်းကိုလာ အန်တီအိခိုင် ဆန္ဒရှိရင်လည်း သားအခန်းလာမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား ” လို့ ချစ်စဖွယ်ပြုံးရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောတယ်လေ။ ။
အနျတီ အိခိုငျအိမျနဲ့ကြှနျတျောတို့အိမျက တဈအိမျနဲ့တဈအိမျ စားအိမျသောကျအိမျ ဖွဈနတောကွာပွီ။ ကြှနျတျောတို့ မိသားစု အဲဒီမွို့ကို စပွောငျးလာတော့ သူ့ရဲ့အိမျနီးခငျြး ဖွဈခှငျ့ရခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောအသကျ ၁ဝနှဈလောကျမှာ စပွောငျးလာတာ ကြှနျတေျာ့မိသားစုကလညျး အမြားကွီး မဟုတျပါဘူး။ အဖရေယျ အမရေယျ ကြှနျတျောရယျမှ မိသားစုက သုံးယောကျပဲရှိတယျ။
ကြှနျတျောက တဈဦးတညျးသောသား အဖကေ ကုနျတငျကားမောငျးတဲ့ ဒရိုငျဘာပေါ့။ အဖကေ နယျထှကျပွီးကားမောငျးနရေတာမြားတယျ။ တဈလမှ သုံးရကျလောကျပဲ အိမျမှာနရေတာလေ။ အမကေလညျး ဈေးတဈခုမှာ ကုနျစိမျးရောငျးတဲ့ ကုနျစိမျးသညျဆိုတော့ အိမျနဲ့ဈေး ဈေးနဲ့အိမျ ဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ စားအိမျသောကျအိမျက အိမျနီးနားခငျြးအိမျဖွဈတဲ့ အနျတီအိခိုငျ တို့အိမျပဲ ဆိုပါတော့။ အနျတီအိခိုငျ အိမျမှာကလညျး အနျတီအိခိုငျရယျ သူ့ရဲ့အမရေယျပဲ ရှိတာဗြ။ အဲ့တော့ သူတို့လညျး အဖျောလိုနတောနဲ့ ကှကျတိဖွဈသှားတာပေါ့။
အနျတီအိခိုငျရဲ့အမကေတော့ ကြှနျတျော ကိုးတနျးရောကျတော့ ဆုံးသှားတယျလေ။ အဲ့ဒီကတညျးက ကြှနျတျော အနျတီအိခိုငျအိမျမှာပဲ အိပျဖွဈတာမြားတယျ။ အဖျောမရှိလို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ တဈခုထဲပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပွောတာမြားပွီးလိုရငျး မရောကျပဲဖွဈနတေော့မယျ။ ဖွဈပကျြခဲ့ပုံက ဒီလိုဗြ ကြှနျတျောကြူရှငျကနေ အစောကွီး ပွနျလာတဲ့နမှေ့ာစဖွဈတာပဲ။ ကြူရှငျဆိုလို့ ပွောရအုံးမယျ ကြှနျတျောက ဆယျတနျးကို နှဈနှဈဆကျတိုကျ ကလြို့ အခုဟာက သုံးနှဈမွောကျ ကြူရှငျ တကျနတေဲ့အခြိနျပေါ့။
အဲ့လို ကြူရှငျက တဈခြိနျဖွတျလိုကျတဲ့နပေ့ေါ့။ ဆရာမ နမေကောငျးလို့,လို့ပွောတာပဲ။ အိမျကိုရောကျတော့ ဗိုကျကလညျးဆာနတောနဲ့ အနျတီအိခိုငျဘာတှမြေားခကျြထားလညျးဆိုပွီး မီးဖိုခြောငျကို ဝငျရှာကွညျ့လိုကျတယျ။ စားစရာဘာမှမတှတေ့ာနဲ့ အနျတီအိခိုငျကို မေးမယျဆိုပွီး သူ့အိပျခနျးထဲမှာ တဈခုခု လုပျနလေားဆိုပွီး တှေးရငျးနဲ့ သူ့အိပျခနျးဘကျကို လြှောကျလာလိုကျတယျ။
ပါးစပျကလညျး အျောချေါရငျးနဲ့ ” အနျတီအိခိုငျ ရေ အနျတီအိခိုငျ စားစရာဘာတှေ ရှိသေးလညျး ” ပွောရငျးနဲ့ သူ့အခနျးရှအေ့ရောကျမှာ အိပျခနျးတံခါးက ခပျဟဟ လေးဖွဈနတောနဲ့ အခနျးထဲကို အမှတျမထငျကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတျော မကျြလုံးပွူးပွီး ကွောငျကွညျ့နမေိတယျ။ ကွညျ့မယျဆိုလညျး ကွညျ့ခငျြစရာဖွဈနတောပါ။ အိမျနရေငျး ဂါဝနျလေးကိုဝတျပွီး အိပျနတော ဒီအတိုငျးဆို အကွောငျး မဟုတျပမေယျ့ အခနျးတံခါးကို ကြောပေးပွီး ဘေးတစောငျးလေးအိပျနတော ဂါဝနျလေးကလညျး တငျပဆုံလောကျထိ လနျနတေော့ အနျတီအိခိုငျရဲ့ အမှေးရေးရေးနဲ့ စောကျဖုတျကွီးကိုမွငျနရေတယျ။
ကွညျ့နရေငျးနဲ့ကြှနျတေျာ့ လီးကလညျး တောငျလာတယျ။ ဘေးတစောငျးအိပျနတေော့ နဂိုကမှ အိုးကောငျးပါတယျ ဆိုမှစောကျဖုတျကွီးကို နောကျလနျပဈပွီး လာလိုးလှညျ့ ပါလို့ ချေါနသေလိုလိုပါပဲ။ ကွညျ့နရေငျးနဲ့ တံထှေးတဈခပျြကို ကှတျကနဲ့ မွညျအောငျ မြိုခလြိုကျရငျး ပွေးပွီးလိုးခငျြနတေဲ့ စိတျကို မနညျးထိနျးခြုပျထားရတယျဗြာ။ ကိုယျ့ရဲ့အဒျေါရငျးလိုပါပဲ လားဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ပွေးပွီး လိုးခငျြတဲ့စိတျက ဒှနျတှဲနခေဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သွျော သွျော ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ တံထှေးကို မြိုခရြငျး နောကျပွနျလှညျ့ပွီး တံခါးကိုပိတျ မီးဖိုခြောငျနဲ့ အခနျးတံခါး အလယျလောကျ ကနပေဲ အျောချေါလိုကျပါတယျ။
” အနျတီအိခိုငျရေ အနျတီအိခိုငျ သားဗိုကျဆာလို့ ” ” အငျးးးး ဟငျ သား လာပွီ အနျတီအိခိုငျလာပွီ သားရေ ” ဆိုတဲ့အသံလေးပွုရငျးနဲ့ ကဗြာကယာနဲ့ ထှကျလာတယျ။ ပွီးတော့ လူက အိပျခငျြမှုးတူးရုပျ ဆံပငျလေးက ကပိုကရိုနဲ့ အိမျနရေငျးဆိုတော့ ဘောလီမပါပဲနဲ့ ဝတျထားတဲ့ ညဝတျဂါဝနျလေးနဲ့ ဆိုတော့ နို့သီးခေါငျးလေးက ရေးရေးလေး ထှကျနသေယောငျနဲ့ ဆိုတော့ စောနက အရှိနျနဲ့ပေါငျးပွီး လီးကပွနျတောငျလာတယျ။ တျောသေးတာပေါ့ အောကျခံဘောငျးဘီပါလို့ နို့မို့ဆို မလှယျပါ။ ” သား ဒီနကြေူ့ရှငျက စောလှခညျြလား ဒါမှမဟုတျ မငျးကြူရှငျ လဈလာတာလား ဟငျ ” ” မဟုတျပါဘူးဗြာ အနျတီအိခိုငျကလညျး ဒီနေ့ တဈခြိနျနားလို့ စောစော ပွနျလာတာပါ သားကြူရှငျ မလဈပါဘူး ” လို့ပွနျပွောလိုကျတယျ စကားကိုလညျး ထိနျးပွီးပွောနေ ရတယျ။ မကျြလှာကို အောကျခပြွီးပေါ့။
မခလြို့လညျးမဖွဈ တျောကွာ မကျြနာပကျြနတော ရိပျမိသှားမှာ ဆိုးလို့ပါ။ အဲ့ဒီကိစ်စ ဖွဈပွီးနောကျပိုငျး ကြှနျတျော အနျတီအိခိုငျအပျေါမှာ မရိုးသားတော့ပါဘူး လိုးခငျြစိတျက မြားနခေဲ့တယျ။ လိုးခှငျ့ရအောငျလညျး အမြိုးကွံနတောပေါ့ဗြာ။ အဖွဈအပကျြကတော့ ဒါပဲဗြာ။ အဲ့လိုစိတျဖွဈနတော ကြှနျတျောလှနျလား မှားလားဗြာ ဒီနလေ့ညျး ကြူရှငျပိတျ လို့ မနကျစာစားပွီး လကျဖကျရညျဆိုငျလာထိုငျနတော ထိုငျနတောက ၃နာရီကြျောရှိပွီဆိုတော့ ပွနျရတော့မယျ။ စိတျကလညျး အနျတီအိခိုငျကို ဘယျလိုလုံးပွီး လိုးခှငျ့ရမလဲ ဆိုတာပဲတှေးနတော တှေးနရေငျး လကျကနျြစီးကရကျတိုကို တဈခကျြဖှားလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ လကျဖကျရညျဆိုငျကနေ ပွနျလာပွီး ကုနျမာဆိုငျကိုဝျ ဆေးလိပျ တဈဘူးဝယျပွီး အိမျပွနျခဲ့တယျ။
အိမျကိုရောကျတော့ အိမျတံခါးက ပိတျထားတာ ပိတျတာကလညျး အတှငျးကဆိုတော့ အနျတီအိခိုငျ ရှိနတေယျ။ အိပျနတော နမှောဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့သော့ပိုနဲ့ဖှငျ့ပွီး ဝငျလာလိုကျတယျ ။ ” အနျတီအိခိုငျရေ … အနျတီအိခိုငျ ” လို့အျောချေါလိုကျတယျ ရခြေိုးခနျးထဲက ရသေံကွားမှ ” အျော…ရခြေိုးနတောနဲ့တူတယျ ” ကြှနျတျောလညျး အနျတီအိခိုငျရခြေိုးနလေို့ ဆကျမချေါမိတော့ပဲ ဧညျ့ခနျးမှာပဲ သတငျးဖတျရငျး ဝငျထိုငျနလေိုကျတယျ။ ” ကြှီ …” ”သား မငျးတဈမနကျလုံး ဘယျတှေ လြှောကျသှားနတောလညျး ဟငျ သား ” ကြှနျတျော အနျတီအိခိုငျကို မော့ကွညျ့လိုကျပွီး ” ဗြာ……အနျတီအိခိုငျ ” ” သား ဘယျတှလြှေောကျသှားနတောလဲလို့ မေးနတော” ကြှနျတျော ခကျြခငျြးမဖွနေိုငျဘဲ မကျြလုံးမြားပွူး၍ ကွောငျတောငျတောငျဖွဈနသေညျ။
ကြှနျတေျာ့ရှတှေ့ငျ ရပျနသေော အနျတီအိခိုငျတဈကိုယျလုံးမှာ ရငျလြားထားသော ထဘီပါးပါးလေး တဈကှငျးသာပါတယျ။ ရခြေိုးထားလို့ ကိုယျလုံးမှာရစေိုနတေော့ ထဘီ နဲ့ အသားက ကပျနတေယျ။ ဆံပငျပျေါမှ ရစေကျကလေးမြားကလညျး ဖွူဖှေးမို့မောကျသော နို့အုံကွီးနှဈခုကွားသို့တဈစကျစကျနဲ့စီးကနြတေော့ ကြှနျတျောလို ဆယျကြျောသကျပိုးထခါစ အရှယျမပွောနဲ့ မွငျသူတကာတောငျ စိတျထိနျး၍ ရနိုငျမညျမဟုတျ ထဘီခွားမှထိုးထှကျနသေော နို့သီးခေါငျး လေးမြားမှာလညျး မွငျသူတကာ စို့ခငျြအောငျ စူထှကျနတေယျ။ ကြှနျတျောလညျး အနျတီအိခိုငျရဲ့ မကျြနှာကို မမွငျတော့ပါဘူး။ နို့အုံဖှေးဖှေးလေးနဲ့ စူထှကျနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးလေး မြားကိုသာ စိုကျကွညျ့နခေဲ့တယျ။
” ဟဲ့ သား … အနျတီ မေးနတေယျလေ ” ” အာ …ဟိုဟာ…ဘယျမှမသှားပါဘူး သားလကျဖကျရညျဆိုငျ ထိုငျနတောပါ ” ” သား နျော အသကျကဖွငျ့ ဘာမှမရှိသေးဘူး လကျဖကျရညျဆိုငျထိုငျရတာနဲ့ ဆေးလိပျလေး သောကျရတာနဲ့နျော ဟငျး ဟငျးးးး ” မကျြနှာကြောလေးတငျးပွီး မကျြစောငျးလေးထိုးပွီး ပွောရငျး အနျတီအိခိုငျလှညျ့ထှကျသှားတယျ။ သူလမျးလြှောကျတာကို ငေးကွညျ့နခေဲ့တယျ။ အနျတီအိခိုငျ ဖငျကွီးက စူကောကျနပွေီး ရစေိုထားတာကွောငျ့ ဖငျအောကျက အရဈကွီးတှကေ ထငျရှားနတေယျ။ ဖငျကွီးက ကိတျကလညျးကိတျ ဖငျကွားထဲမှာ ထဘီက ညကျနသေေးတော့ ကြှနျတေျာ့ စိတျထဲမှာ ပွေးပွီးသာ စောငျ့လိုးနမေိတော့တယျ။
လီးကလညျး တောငျလာတော့ အနျတီအိခိုငျရဲ့ ဖငျကွီးကို ဖုနျးနဲ့ ဓါတျပုံရိုကျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ အိမျသာထဲကိုသှား ဖုနျးထဲကအနျတီအိခိုငျ ဖငျကွီးကိုကွညျ့ပွီး ဂှငျးထုပဈလိုကျတယျ။ ထုပွီးသှားတော့မှ ဧညျ့ခနျးမှာ ပွနျထိုငျနလေိုကျတယျ။ အနျတီအိခိုငျကလညျး ကြှနျတျော အမူအရာတှေ ပကျြနတောကို သတိထားမိတယျထငျတယျဗြ။ ကြှနျတျော ဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျနတေုနျး အနျတီအိခိုငျ သူ့အခနျးထဲကနေ အဝတျအစားလဲပွီး ဧညျ့ခနျးကို ထှကျလာတယျ။ အားပါးပါး လှလိုကျတာဗြာ အစိမျးရောငျရညှေိ အကှကျတှနေဲ့ ခပျပါးပါးအကငြ်ျီကိုဝတျထားတာတော့ အကငြ်ျီအောကျက အနီရောငျဘျောလီကို ထငျးထငျးကွီးမွငျနရေတယျ။ ထဘီကလညျး အစိမျးရောငျနုနုအအိသားကို ဝတျထားပွနျတော့ ကောကျခြိတျနတေဲ့ ဖငျကွီးက နုအိပွီးရမျးခါနတောပေါ့။ အသားအရကေ ခပျလတျလတျအရပျကမနိမျ့မမွငျ့နဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတဲ့ ကိုယျလုံးကွီးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူဆိုတော့ မွငျရတဲ့ ပုထုဇဉျယောကြာင်ျးသားတှေ လီးမတောငျရငျ ခံနိုငျရိုးလားဗြာ။ အခနျးပွငျရောကျမှ ဒေါကျဖိနပျကို ကုနျးပွီးစီးလိုကျတော့ နို့အုံကွီးတှကေအောကျကို တှဲကလြာတယျ နို့အုံကွီးကွားထဲကို ကြှနျတေျာ့လီးနဲ့တာ ပွေးပွီး လိုးခငျြနမေိတယျ။
ဖှပွီးကောကျထားတဲ့ဆံပငျတှကေိုလညျး ကြှနျတေျာ့ လီးကို အယားပွပှေတျခငျြနမေိတယျ ။ ” သား … ထမငျးစားရအောငျ” “ဟုတျ အနျတီအိခိုငျ” ထမငျးက သိပျပွီးဆာလှတယျမဟုတျ အနျတီအိခိုငျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးကို အနီးကပျထပျပွီး ကွညျ့ခငျြနတောကွောငျ့ပါ။ ” သား … ဟငျးတှထေညျ့စားလေ ” ပွောလညျးပွော ဟငျးကိုလညျး ထမငျးပနျးကနျထဲ ထညျ့ပေးရငျးပေါ့။ ” ဟုတျ … အနျတီအိခိုငျ ကနျတော့နျော ” ” အမလေးဟယျ ဒီနမှေ့ထူးထူးခွားခွား ပွီးတော့ သားကို တဈခုပွောရအုံးမယျ သားက အရှယျမရောကျသေးဘူး ဘာညာဘာညာတှေ အနျတီ မကွားခငျြဘူးနျော ” ” သားက ဘာတှလေုပျနလေို့လညျး ဗြ ” ” ဟငျး ဟငျးးးးး သားရဲ့အဝတျအစားတှနေဲ့ အိပျယာခငျးတှကေို အနျတီ လြှျောတာပါ မငျးဘာတှလေုပျနတေယျဆိုတာ အားလုံးသိတယျ ” ကြှနျတျောလညျး သူ့စကားကို ဂရုမစိုကျနိုငျပဲ သူ့ရဲ့ နို့အုံကွီးကိုပဲ ငေးကွညျ့နမေိတယျ။
” ဟဲ့ …သား ဘာကွညျ့နတောလဲ ” လို့ပွောမှ ကြှနျတေျာ့ မကျြလုံးကို ထမငျးပနျးကနျပျေါ လှဲလိုကျရတယျ ထမငျးစားပွီးတော့ကို လီးက တောငျနသေေးတယျ။ စားသောကျပွီးသှားတော့ အနျတီအိခိုငျ ပနျးကနျတှသှေားဆေးတယျ။ ဆေးပွီးသှားတော့ ပနျးကနျတှကေို ကွောငျအိမျထဲ ထညျ့နတေယျ။ ထမငျးစားပှဲနဲ့ ကွောငျအိမျကလညျး ကပျနတောဆိုတော့ အနျတီအိခိုငျစားပှဲကွားဝငျပွီး ကွောငျအိမျထဲ ပနျးကနျတှထေညျ့တော့ သူ့ရဲ့ဖငျကွီးနဲ့ နရောက တငျပွညျ့နတေယျ။ ကြှနျတျောလညျးထမငျးစားပွီး ဆေးလိပျလေးသောကျပွီး ရသေောကျခငျြတာနဲ့.. ” အနျတီ နညျးနညျးလောကျ ” အနျတီအိခိုငျက ရှကေို့ကုနျးပွီး တိုးလိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့စိတျကွိုကျ ဒီဇိုငျးဖွဈသှားတာပေါ့။ ဖငျလုံးကွီးက အပျေါကိုကော့တတျနတေယျ။ ကြှနျတျောလညျး စားပှဲကွားကို တိုးဝငျလိုကျပွီး အိစကျပွီး ကော့တကျနတေဲ့ အနျတီအိခိုငျဖငျကို တောငျနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးနဲ့သှားထောကျမိတယျ။
ဖငျကွီးကလညျး တငျးတငျးလေးဆိုတော့ စက်ကနျ့တျောတျောကွာတဲ့အထိ ပှတျနမေိတယျ။ သူကလညျးငွိမျခံတော့ ” အိုး… … ရှီး.. …ကောငျးလိုကျတာ အနျတီအိခိုငျရယျ ” ဆိုပွီး စိတျထဲကနေ ပွောနတေုနျးရှိသေး.. ” အို့ ဟငျ့ … အငျး သားရယျ သားလီးက နှေးနတောပဲ ” အနျတီအိခိုငျ ပွောလညျးပွော သူ့ဖငျကွီးကို အပျေါမွောကျလိုကျ အောကျခလြိုကျနဲ့ ပှတျလိုကျနဲ့လုပျနတေော့ ကြှနျတျောလညျး ခါးကို နောကျနညျးနညျးဆုတျ အားနဲနဲယူပွီး ဆောငျ့နလေိုကျတာ တျောတျောလေးကွာတော့ ကြှနျတေျာ့ လီးထိပျက အရညျလေးတှေ စို့လာတာကို သတိထားမိတယျ။
” အာ့ … အာ … အိုး.. ဆောငျ့ပါအုံး သားရယျ ” လို့အနျတီအိခိုငျကပွောတော့ ကြှနျတျောလညျး သူ့ဆံပငျတှကေို ခပျဖှဖှလေး ဆှဲပွီး လကျတဖကျက ဖငျတှကေို ပှတျနရေငျးနဲ့ဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ဆံပငျဆှဲထားတဲ့လကျကို ဖယျလိုကျပွီး ကြှနျတျောပုဆိုးကို ဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ ပုဆိုးခြှတျလိုကျတော့မှ အနျတီအိခိုငျက ကြှနျတေျာ့ဘကျလှညျ့ပွီး ကြှနျတေျာ့ ပါးစပျကို သူ့ပါးစပျနဲ့တပွေီ့းနမျးတယျ။ ပွီးမှ ကြှနျတေျာ့ပါးစပျထဲကို သူ့ရဲ့ လြှာနဲ့တိုးပွီးဝငျလာပွီး ကလိသှားလိုကျ ကြှနျတေျာ့ ပါးစပျလေးကို ခပျဖှဖှကိုကျလိုကျ လုပျတော့ ကြှနျတျောလညျး ဘယျလိုမှကိုမနနေိုငျတော့နဲ့ သူ့ကို ဆှဲလှနျမယျလုပျမှ သူကဒူးထောကျထိုငျကာ သူ့ရဲ့လကျတဈဖကျနဲ့ ကြှနျတေျာ့ အောကျခံဘောငျးဘီကွားထဲ လကျနိုကျပွီး လီးကို အပျေါဆှဲထုတျလိုကျတယျ။
ပွီးတော့ ” အနျတီအိခိုငျရဲ့ အဖုတျလေးကိုလညျး ကုနျးပွီး ပှတျပေးပါဦးကှယျ ” ပွောလညျးပွော ဂှငျးတိုကျသလိုလေး လုပျပေးနတေော့ ” အာ့ … အား.. သား ပွီးတော့မှာ ” လို့ပွောလိုကျတယျ။ ဟုတျတယျလေ ကိုယျ့လီးကို ကိုငျပွီး ဂှငျးထုတာနဲ့ ခုလို မိနျးမတဈယောကျက ကိုငျပွီးလုပျပေးနတောက ခံစားရတာခငျြးမတူဘူးဗြ ခံစားလို့ရမျးကောငျးတာဗြ။ ပွီးတော့ အနျတီအိခိုငျက ဘောငျးဘီကွားကနေ အပျေါကိုထောငျနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးကို အောကျခံဘောငျးဘီအပျေါကနပေဲ သူ့သှားနဲ့မနာအောငျ ခပျဖှဖှလေး ကိုကျပေးလိုကျ ဒဈကလေးကို စုပျလိုကျဆိုတော့ ကြှနျတျောလညျး အနျတီအိခိုငျရဲ့ ခေါငျးကိုဆှဲ သူ့ပါးစပျကို ကြှနျတေျာ့လီးနဲ့ တအားဆောငျ့ထိုးမိလိုကျတယျ။
” အာ့… အှတျ … ဟှတျ … အဟှတျ အဟှတျ…” သူလညျတှတေောငျ နငျပွီး ခြောငျးတောငျဆိုးတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ဖီးတအားကောငျးလာတာနဲ့ အနျတီအိခိုငျကို ခဏဖယျခိုငျးပွီး အောကျခံဘောငျးဘီ ကို ခြှတျလိုကျတယျ။ အနျတီအိခိုငျလညျး ကြှနျတေျာ့ရဲ့လီးကို ကွညျ့နရေငျး သူ့ရဲ့အဝတျအစားတှကေို အကုနျခြှတျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့လီးကို သူ့လကျနဲ့ ရှတေို့းနောကျဆုတျ လုပျပွီး ဂှငျးထုပေးတယျ။ ကြှနျတျောက အနျတီအိခိုငျရဲ့မေးရိုးကို လကျနဲ့ ညှဈလိုကျမှ ပါးစပျလေး ဟသှားတာ အဲ့တော့မှ သူ့ရဲ့နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို ကြှနျတျော တဈခကျြနမျးလိုကျပွီးမှ လီးဒဈထိပျလေးနဲ့ ပှတျလိုကျ ပါးစပျကိုလိုးလိုကျနဲ့ ဆယျ့ငါးခကျြလောကျ ရှိအုံးမယျ။
ကြှနျတျောလညျး အရှိနျမထိနျးနိုငျတာနဲ့ သူ့ရဲ့ ပါးစပျထဲတငျ တဈခြီပွီးလိုကျတယျ။ သူ့ရဲ့ ပါးစပျတဈခုလုံးလညျး ကြှနျတေျာ့ လီးရညျတှေ ပပှေကုနျတယျ။ ပါးစပျထဲဝငျတဲ့ လရညျတှကေို မြိုခပြွီး အပွငျမှာ ပနေတေဲ့ လရညျတှကေိုလညျး သူ့လကျနဲ့ယူပွီး စုပျပွတော့ ကြှနျတျောလညျးခါးကို နောကျနညျးနညျးဆုတျအရှိနျယူပွီး သူ့ပါးစပျကို တအားဆောငျ့လိုးလိုကျတယျ။
” အို့… အား…… ရှီး.. ကောငျးလိုကျတာ အနျတီအိခိုငျရယျ ” အနျတီအိခိုငျ ပါးစပျထဲကို လီးတခြောငျးလုံး ဝငျသှားပွီး သူရဲ့ မကျြနှာကလညျး ကြှနျတေျာ့ပေါငျရငျးသို့ ကပျသှားတယျ။ ” ဂှတျ … အှတျ … အဟှတျ အဟှတျ ” အနျတီအိခိုငျက ကြှနျတေျာ့လီးကို သူ့ပါးစပျထဲက ထုတျလိုကျတယျ။ သူလညျး မောမောနဲ့ကွမျးပွငျပျေါ ဖငျခထြိုငျလိုကျတယျ။ နံရံကိုကြောမှီပွီး ခွထေောကျကို နညျးနညျးကားထားတော့ ဖုဖောငျးပွညျ့မောကျနတေဲ့ သူ့စောကျဖုတျကွီးက အရညျတှကေိုရှဲလို့ ကြှနျတျောလညျး သူ့စောကျဖုတျကွီးကို ကွညျ့ပွီး စိတျမထိနျးနိုငျတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ပဲ အနျတီအိခိုငျရဲ့ ပေါငျကိုဖွဲလိုကျပွီး ကြှနျတျောလညျး ဝမျးလြားမှောကျ ကြှနျတော့ခေါငျးကို သူ့ပေါငျးကွားထဲတိုးဝငျပွီး စောကျဖုတျကွီး တဈခုလုံးရဲ့ ဘေးမှာပနေတေဲ့ သူ့ရဲ့ စောကျရညျတှကေို ပါးစပျနဲ့ကုနျးစုပျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ စောကျဖုတျအကှဲကွောငျး တဈလြှောကျကို လြှာဖြားနဲ့ အထကျအောကျ ပှတျဆှဲလိုကျ စောကျဖုတျထဲကို လြှာနဲ့လိုးလိုကျ စောကျဖုတျအတှငျးထဲကို ရောကျနိုငျသမြှ ရောကျအောငျ ကြှနျတေျာ့ လြှာကို ထိုးထညျ့လိုကျပွီးတော့ သူ့ရဲ့စောကျစလေ့ေးကို သှားလေးနဲ့မနာအောငျ ဖှဖှလေး ထပျကိုကျလိုကျတော့ အနျတီအိခိုငျလညျး ခါးလေးကော့လာပွီး ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဆံပငျအုံကွီးတခုလုံးကို သူ့ရဲ့လကျနှဈဖကျနဲ့ လှတျသှားမှာစိုးသညျ့အလား တအားဆုတျကိုငျလိုကျတယျ။
” အငျ့ … အို့ … အား… မခံစားနိုငျတော့ဘူးကှာ အနျတီအိခိုငျ တအားလိုခငျြနပွေီ သားရယျ အနျတီအိခိုငျကို နှိပျစကျနတောလားကှာ ” လို့မပီမသနဲ့ပွောရငျး ” သား … ထတော့ ပွီးရငျ ခွထေောကျကိုဆငျးပွီး ထိုငျလိုကျ ” ကြှနျတျောလညျး မှုတျနရောကရပျလိုကျပွီး ခွဆေငျးထိုငျပေးလိုကျတယျ အနျတီအိခိုငျလညျး တျောတျောထနျနပေါပွီ။ အငမျးမရကိုဖွဈလို့ပေါ့ အနျတီအိခိုငျလညျး ထိုငျနရောက ထလိုကျပွီး ကြှနျတေျာ့ရဲ့လီးကိုကိုငျကိုငျပွီး အပျေါကနေ ခှထိုငျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့သူ့ရဲ့ စောကျဖုတျနဲ့ လီးကိုတပွေီ့း ဖွညျးဖွညျးခငျြးပဲ ဆီးခုံးနှဈခုထိတဲ့အထိ ထိုငျခလြိုကျတယျ။
” ဗဈြ……ဗဈြ…… ဗွီး…..” စောကျဖုတျထဲကို လီးအဆုံးဝငျသှားတော့မှ ခပျမှနျမှနျလေးဆောငျ့ပေးတယျ။ ” အာ့ အို့ အငျး…” ” ဖတျ… ဖတျ … ဖတျ ဖောကျ … ဖာကျ … ဖောကျ ဖှတျ … ဖှတျ … ဖှတျ ” ” အာ့ အို့ အငျး… ကောငျးလိုကျတာ သားရယျ” ” ဖတျ… ဖတျ… ဖတျ ဒုတျ … … ဗှီ … … ဗဈြ … … ဗဈြ ” ပွောလညျးပွော အပျေါကနေ တအားဆောငျ့နတေော့ ကြှနျတျောလကျကလညျး အငွိမျမနပေါဘူး။ သူ့ရဲ့ နို့နှဈလုံးကို ဆှဲပွီး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ခပျဖှဖှခပြေေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့မှ ဖွူဖှေးပွီးအိစကျနတေဲ့ နို့နှဈလုံးကွားကို ခေါငျးဝငျပွီး တအားရှုံ့နမျးပွီး ကုနျးစို့နမေိတယျ။ သူကတော့ အဆောငျ့မပကျြဘူး ကြှနျတျောလညျး နို့ကွားကနေ ခေါငျးကိုဖယျလိုကျပွီးလကျတဈဖကျနဲ့ နို့သီးတလုံးကို ဖမျးစုပျလိုကျပွီး နို့သီးခေါငျးလေးကို အားထညျ့ပွီး ကိုကျလိုကျတော့။
” အာ့…အားး အို… အို့ သားရယျအနျတီ မရတော့ဘူးကှာ ” ” ဖတျ… ဖတျ… ဖှတျ… ဖှတျ… ဗွီး… ” ” အာ့ … အာ့… အာ့… ” အနျတီအိခိုငျ တဈကိုယျလုံးတှနျ့လိမျသှားတယျ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ လီးကလညျး ပူနှေးနှေးအရသာကို ခံစားလိုကျရတော့ အောကျကနပွေီးတော့ လကျနှဈခြောငျးလုံးကို နောကျမှာ အားယူထောကျလိုကျပွီး တအားပွနျဆောငျ့လိုကျတော့ သူ့ရဲ့ စောကျဖုတျကွီးထဲက သားအိမျလေးကို ကြှနျတေျာ့ရဲ့ လရညျနှေးနှေးလေးတှေ ပွနျပနျးထညျ့ပေးလိုကျတယျ။
” အား…. ကောငျးလိုကျတာ အနျတီအိခိုငျရယျ ” အနျတီအိခိုငျကလညျး မောမောနဲ့ ကြှနျတေျာ့လညျပငျးကို ဖကျးထားရငျးနဲ့ မှိနျးပွီးအမောဖွနေတေယျ အမောပွတေော့ သူကြှနျတေျာ့အပျေါကနေ ထပွီး ဆငျးမယျ့အလုပျ မဆငျးစပေဲ သူ့ကိုပွနျဆှဲဖကျလိုကျတယျ။ ပွီးမှ သူ့မကျြနှာကို ကြှနျတေျာ့ဘကျလှညျ့လိုကျပွီး ” နောကျထပျလညျး အနျတီအိခိုငျကို လိုးခငျြသေးတယျ ” ” သွျော သားရယျ အနျတီအိခိုငျကလညျး ဘယျမှ ထှကျမပွေးပါဘူး သားနဲ့အနျတီမအိခိုငျက တဈအိမျထဲမှာ အတူနနေကေတြာလေ သားဆန်ဒရှိတဲ့ အခြိနျတိုငျး အနျတီအိခိုငျရဲ့ အခနျးကိုလာ အနျတီအိခိုငျ ဆန်ဒရှိရငျလညျး သားအခနျးလာမှာပေါ့ ဟုတျဘူးလား ” လို့ ခဈြစဖှယျပွုံးရငျးနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ပွနျပွောတယျလေ။ ။
ခဈြ ရပါသော ဟနျနီ